USA oo ka walaacsan hadallada madaxweynaha Philippines - BBC News Somali
Image caption Kaaliyaha xog-haya arrimaha dibadda Maraykanka, Daniel Russel, oo soo dhaweeyay xidhiidhka China, Philippines ee soo fiicnaanaya
Diblomaasiga ugu sareeya waaxda qaabilsan qaaradda Asia ee wasaaradda arimaha dibada Maraykanka, oo booqasho ku jooga magaalada Manila, ayaa sheegay in hadalladii dhawaan ka soo yeedhay madaxweynaha Philippines, Rodrigo Duterte, ay walaac ka dhaliyeen Maraykanka iyo waddamo kale.
Kaaliyaha xog-hayaha arimaha dibadda, Daniel Russel, ayaa sheegay in hadalladaasi ay abuureen "jawi hubanti la'aan ah" oo laga qabo ujeedada ay Philippines ka lahayd.
Madaxweyne Duterte ayaa sheegay in "xidhiidhka ka furanayaan Maraykanka" oo ay muddo dheer xulufo ahaayeen. Arrintani waxay daba socotay dhaliishii Maraykanku u soo jeediyay "dagaalka adag" ee ay Philippines ku qaaday daroogada iyo dadka ka ganacsadaba. Waxaana dagaalkaa lagu dilay kumanaan qof iyaga oon sharciga la hor keenin.
Kaaliyaha xog-hayaha arrimaha dibadda Maraykanka Russel ayaa sheegay in Marakanku walaac wayn ka qabo dadkal lagu laynayo amarka uu Mr Duterte bixiyey ee ah in la ugaadhsado dadka ka ganacsada daroogada.
Madaxweyne Duterte ayaa si isa soo taraysa u collaystay Maraykanka ilaa iyo intii uu xilka la wareegay bishii June ee sannadkan. Wuxu sheegay in uu doonayo inuu joojiyo dhoola tus milatari oo dalkiisu la samayn lahaa Maraykanka waxaanu madaxweyne Barack Obama mar ku yidhi "naarta ka cab" ka dib markii uu dhaliilay dagaalka uu ku qaaday ganacsiga daroogada.